Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1399
Madagasikara-Turquie : nahazo tombony manokana ny kaominina Ivato
Par Taratra sur 16/04/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Ordinatera arifomba 25 sy kojakoja miaraka aminy ary video projécteur. Natolotry ny masoivoho turque ho an’ny kaominina Ivato ireo omaly. Nitenti-bidy hatrany amin’ny 50 tapitrisa Ar ny fitaovana. Natao ho an’ny mpianatra sy ny ankizy ao amin’ny kaominina Ivato ny fampiasana ireo fitaovana ireo. Entina hanovozam-pahalalana sy hanaovana fikarohana izany raha ny fanazavana hatrany. Tsy […]
« Du jamais vu II » : hamerina ilay seho miavaka i Njakatiana
Par Taratra sur 16/04/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Isaky ny manao seho goavana, miezaka mitady izay hampiavaka izany mba hotsaroan’ny mpankafy foana i Njakatiana. Anisan’ny niavaka tao anatin’ny maro anefa ny « Du jamais vu », izay notontosainy ny 27 novambra 2009 tao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ho an’izay nahatsiaro. Fantatra izao fa hisy andiany faharoa ny « Du jamais vu », izay hotontosaina ao amin’ny lapan’ny […]
Telma : azo ampiasana MVola ny fividianana solika
Par Taratra sur 16/04/2016 Divers, NS Malagasy
Miara-miasa amin’ireo toby mpaninjara solika telo, Shell, Jovenna, Galana ny Telma. Tombontsoa azo, tsy voatery mampiasa lelavola intsony ny mpanjifa fa afaka mampiasa ny MVola ny solika sy ny kojakoja samihafa, eny amin’ireo toby maherin’ny 200 manerana ny Nosy. Azo atao koa ny mandrotsaka na misintona vola eny amin’ny toby fivarotana solika. Izany hoe, azo […]
Raha hiova ny mpitantana… : tokony hitohy ny fandraisana mpampianatra
Anisan’ny nisy fivoarana lehibe ny tontolon’ny fampianarana, indrindra ho an’ireo mpampianatra Fram voaray ho mpiasam-panjakana tao anatin’ny taona maromaro. Raha hiova ny mpitantana ny ministera ao anatin’ny governemanta vaovao, irariana ny hanohizany ny fandraisana mpampianatra. Ao anatin’ny fanomanana ny fanadinam-panjakana rahateo koa ny minisitera ka tokony tsy hisy ny fanovana ny fomba fiasa hampitarazoka ny […]
Nanolotra rano 3 000 : miara-dalana amin’ny Smile ny Star
Nanolotra tavoahangin-drano 3 000 ho an’ireo olona sima niatrika fandidiana ao anatin’ny hetsika Smile, teny amin’ny HJRA, izay nifarana omaly ny orinasa Star. Fandidiana andiany faha-13 no notanterahina teny Anosy. Nanomboka ny taona 2007 nisantarana ny asa teto amintsika, manodidina ny 1 900 ny olona ankizy sy tanora nahazo tombontsoa teto Antananarivo, Antsirabe ary Toamasina. Ny […]
Toamasina II : 7 000 ny ankizy tombanana hatao vaksiny
Tontosa, anio, ny andiany faha-8 ho an’ny ady atao hiarovana ny taranaka malagasy amin’ny poliomelita . Ho an’ ny faritra Atsinanana manokana, mbola tsy tratra ny tanjona teo amin’ny isan’ny ankizy tokony hovitaina vaksiny. Mbola nahitana soritraretina poliomelita rahateo tao amin’ny kaominina ambanivohitra Mahanoro sy Marolambo. Ho an’ny disitrikan’ i Toamasina II, nampitoboina ny isan’ny mpikirakira […]
Parking : notoloran’ny Easypark fitaovana fanagiazana fiara ny CUA
“Taquet d’arret” na fitaovana fanagiazana fiarakodia tsy hihetsika miisa 10 no natolotry ny orinasa Easypark ny kaominina Antananarivo Renivohitra, omaly. Nanolotra izany fitaovana izany tamin’ny alalan’ity orinasa ity ny tale teknikany Raveloson Rivo, nandray izany tamin’ny anaran’ny kaominina kosa ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna, Gabriel Harisson. Natao tsy hampihetsika ny fiarakodia amin’ny toerany, amin’ny fandikan-dalàna […]
Hisy fiantraikany manomboka rahampitso : nitombo hery hatrany i Fantala
Tsy afa-bela amin’ny toetry ny andro ny faritra avaratra. Nahazo orambe izy ireo tamin’ny fiandohan’ny taona teo ary nitohy hatrany izany. Amin’izao fotoana izao, mila miomana sahady koa ny mponina fa mitombo hery i Fantala ary hitondra onjabe sy rivotra ho an’iny faritra iny. Araha-maso rahateo ny fivoarany. Rahampitso, hanomboka ho hita taratra any […]
Fahasalamana : miandrandra minisitra hentitra amin’ny kolikoly ny olon-tsotra
Rova, tanora mpianatra Tena mandringa tanteraka raha ny tontolon’ny fitsaboana eto amintsika. Mila manarina izany izay ho minisitra vaovao eo. Hentitra amin’ny tsolotra anelankelan-trano ataon’ny mpiasan’ny fahasalamana eny amin’ny hopitaly. Mahasahy manasazy ary mahavita manara-maso akaiky ny zava-mitranga eny amin’ny toeram-pitsaboana. Mila mamaky bantsilana ny zava-miafin’ny vaksiny gaboraraka omena lava ny ankizy malagasy io ihany […]
Filoha Rajaonarimampianina : “Fifanomezan-tanana ny fampandrosoana fa tsy fanakianana fotsiny”
Par Taratra sur 16/04/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Hanao ahoana ny ho tohin’ny toe-draharaham-pirenena? Mila fifanomezan-tanana ny fampandrosoana fa tsy fanakianana fotsiny, raha ny nambaran’ny Rajaonarimampianina. “Zava-dehibe ny fihavanam-pirenena sy firaisankina, ary atao ao anatin’ny fifanomezan-tanana ny fampandrosoana fa tsy fanakianana fotsiny. Tsy maintsy mifanontany tena isika: inona no efa nataoko? Sao efa teo ihany aho ka tsy nahavita.” Io no nambaran’ny […]
Minisiteran’ny Atitany : mikendry hanao ampihimamba ny fifidianana i Mahafaly S.
Mazava izao ny tetika sy paikady. Praiminisitra sady minisitry ny Atitany i Mahafaly Solonandrasana, araka ny fanendrena natao, omaly teny Iavoloha. Minisitera fanalahidy sy iankinan’ny fiandrianam-pirenena ny eo anivon’ny Atitany. Midika izany fa hanao rapa-dango amin’ireo fifidianana rehetra mbola hotanterahina ity Praiminisitra sady minisitry ny Atitany ity. Anisan’ny fifidianana mbola hataontsika ny eny anivon’ny faritra […]
F3M : « Handray ny andraikitra izahay »
Nivoaka amin’ny fanginany ary namelively ny praiminisitra vaovao avy hatrany. « Mampahafantatra anao izahay amin’ny maha lehiben’ny fitantanan-draharaham-panjakana anao fa handray ny andraikitray izahay manoloana ny gaboraraka sy ny tsy famahana haingana ireo olana eo anivon’ny mpiasam-panjakana namanay, toy ny mpirakidraharaha sy ny mpandraharaha ny fonja », hoy ny fanambaran’ny Fiaraha-mientan’ny mpiasam-panjakana (F3M), omaly. Nohitsin’izy ireo fa manamafy […]
Kidnapping karana : nalain’ny jiolahy an-keriny i Shane Kourdjee
Vao niditra ny trano fonenany i Shane Kourdjee, 33 taona, karana iray tompon’ny orinasa Grain Export ao Antsirabe, no nisy naka an-keriny, ny alakamisy alina teo, tokony ho tamin’ny 10 ora. Fantatra fa efa-dahy nitondra Kalachnikov no naka azy an-keriny, ary nampiditra azy tao anaty fiara 4L. Voalaza fa nanao fanamiana mitovy amin’ny an’ny mpitandro […]
Filaminam-bahoaka : nahazo minisitra vaovao ny polisy
Mbola voatazona teo amin’ny toeran’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena fa niova anarana ho Sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena misahana ny zandarimaria ao anatin’izao governemanta vaovao izao, ny Jly Paza Didier Gérard. Voatendry ho minisitry ny Filaminam-bahoaka kosa, ny Contrôleur général de police, Norbert Anandra, izay nisolo toerana ny minisitra teo aloha tao anatin’ny governemanta Ravelonarivo […]
Kitra – «Ligue des champions d’Europe» : hidona amin’ny Bayern de Munich ny Atletico
Par Taratra sur 16/04/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Manchester City hifanehatra amin’ny Real de Madrid ary Atletico hifanazava amin’ny Bayern de Munich. Ireo no vokatry ny fisarihana, natao tany Nyon Soisa, omaly, ho an’ireo ekipa hihaona amin’ny manasa-dalana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions 2016”, taranja baolina kitra. Anisan’ny lalao andrasan’ny rehetra ary hiendrika famaranana kely ny an’ny Atletico de […]
Andravoahangy : nirefotra ny basy, lasan’ireo jiolahy ny vola amin’ny baoritra
Raim-pianakaviana iray naratra nodarohan’ny jiolahy nandritra ny fanafihana toeram-pivarotana iray eny Andravoahangy, omaly antoandro. Nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika ireo jiolahy. Vola amin’ny baoritra no lasan’izy ireo… Nirefotra ny basy nandritra ny fanafihan’ireo jiolahy miisa telo nirongo basy mahery vaika teny Andravoahangy, omaly antoandro. Araka ny fitantaran’ireo niharam-boina, niditra an-keriny tao am-pivarotana ireo jiolahy. Ny […]
Tsy sakaizan’ny mpandresy ny vahoaka… resy
Par Taratra sur 16/04/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Efa zary fomba fiteny hafahafa ankehitriny ny hoe “sakaizan’ny mpandresy”, ilazana ireo mpanao politika mpisolelaka, mpivadika palitao, mpitady seza… Na iza na iza eo amin’ny fitondrana, manao izay hidirana sy hanjakana amin’izany hatrany izy ireo. Lany henatra, lany fotoana, lany vola… Tsy mahagaga raha mirongatra tato ho ato ny fanambarana sy fanohanana ataon’izao karazana fikambanana […]
Manohy ny fitokonany ny mpirakidraharaha amin’ny fitsarana, tarihin’ny sendikàny. Toy izany koa ny mpandraharaha fonja. Manambatra ny heriny aza ny sendikà roa tonta, fa hoe tsy mijery ny fitakiany momba ny tambin-karama, fampitaovana… Mitaraina ireo manan-draharaha eny amin’ny fitsarana, ireo manana voafonja tokony hotsaraina. Misy aza ny manahy ny hampirongatra ny fitsaram-bahoaka. Tsy vitan’izany, manambana […]
Par Taratra sur 16/04/2016 La Une, NS Malagasy, NS-Politique
Tafatsangana, omaly ny governemantan’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana. 12 ireo minisitra vaovao amin’ireo 32 notendrena… Tsy tena vaovao koa anefa fa efa fantatra ny sasany amin’izy ireo… Ny tonta ihany no navadibadika… Nambara fa vonon-kiady amin’ny fahantrana sy hijery ny sosialim-bahoaka ? Niova seza fotsiny ihany ny maro amin’ireo minisitra vao notendrena. Lasa minisitra eo […]
Haltérophilie – Afrika 2016 : atleta fito mianadahy hanafika any Kameronina
Par Taratra sur 15/04/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Fantatra fa handray anjara amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, taranja fibatana fonjamby, isika. Atleta fito mianadahy kosa no mandrafitra ny ekipam-pirenena amin’izany. Mazava. Handray anjara amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika eo amin’ny taranja fibatana fonjamby, sokajy “seniors” lahy sy vavy, i Madagasikara. Fifaninanana iraisam-pirenena hotanterahina, ny 5 hatramin’ny 15 mey, any Yaoundé, Kameronina. Araka izany, […]
Rugby – «Tournoi de vacance» : hatao rahampitso ny famaranana rehetra
Par Taratra sur 15/04/2016 Divers, NS Malagasy
Hotontosaina, rahampitso asabotsy 16 avrily izao, eny amin’ny kianja Sabotsy-Namehana ny famaranana hiadiana ny amboara «Tournoi de vacance de pâques», taranja rugby sokajy «cadet» sy «junior». Fihaonana izay karakarain’ireo mpianatra avy ao amin’ny ANS Ampefiloha, «option rugby», tarihin-dRandrianantenaina Imboasalama Andry. Anisan’ny misongadina amin’izany ny «cadet», hifanandrinan’ny XV Dakar Manjakaray sy ny Sab-Nam. Ala vela izy […]
Kitra – «Ligue des champions d’Europe» : nidaraboka ny FC Barcelone andrarezina
Vizana ary nidaraboka tamin’ny tany ny FC Barcelone, andrarezin’ny baolina kitra Espaniola sy any Eoropa. Nihintsana teo amin’ny ampahefa-dalana ry Messi sy Suarez ary Neymar (MSN), teo amin’ny fiadiana ny “Ligue des champions d’Europe 2016”. Ny Atletico de Madrid, izay rahalahiny ihany no nanakana ny lalany, tamin’ny isa 2 noho 0, nandritra ny lalao miverina […]
Politika momba ny toekarena : andrasana ny antontanisa momba ny mponina
Par Taratra sur 15/04/2016 Economie, NS Malagasy
Ilaina ny fahafantarana marina ny isan’ny mponina fa tsy ny tombantombana fotsiny. Ho fahafantarana izany, najoro ao amin’ny Instat ny tetikasa fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana na ny RGPH (Recensement général de la population et de l’habitat). Tsy zava-baovao io tetikasa io ao amin’ny Instat, saingy olana hatramin’izay ny vola hanatanterahana azy. Mitohy ny […]
Ravalomanana : vonona hiara-kiasa amin’ny fitondrana
Nanamafy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc fa mitsodrano ireo minisitra roa ao anatin’ny governemanta teo aloha, hanohy ny andraikiny amin’izao governemanta vaovao izao. Antony, efa hita ny vokatra vitan’ireo minisitra avy amin’ny antoko Tim ireo amin’ny hampandrosoana ny firenena. Nanamafy izany rahateo ny minisitry ny Fambolena, Ravatomanga Roland, fa hitsinjo ny vahoaka maro an’isa […]
Nitsidika ny toeram-pitrandrahana tany Ambatovy Moramanga sy ny ozinina fanodinana ny nikela sy kobalta ny delegasiona maro avy ao amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika (MPMP), ny herinandro lasa teo. Tafiditra ao anatin’ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpiasa izany, novolavolain’ny fitantanana ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy stratejika ao amin’ny minisitera. Tanjona ny ahalalan’izy ireo […]
« Précédent 1 … 1 397 1 398 1 399 1 400 1 401 … 1 492 Suivant »